स्वेतपत्र जारी गरेर कसैलाई नतर्साउन सांसद जनार्दन शर्माको चेतावनी | Business TV Nepal
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दन शर्माले स्वेतपत्र जारी गरेर कसैलाई नतर्साउन चेतावनी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले गलत तथ्यहरु राखेर स्वेतपत्रको नाममा कसैलाई नतर्साउन चेतावनी दिनुभएको हो । शर्माले आफुले गृहमन्त्रीबाट २०७४ असोज ३० गते नै राजिनामा दिएको भएपनि २०७४ कात्र्तिक १३ गते भएको भनिएको निर्णयमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति गम्भिर आपत्ति जनाउनुभयो । २०७४ असोज ३० गते नै आफु गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तर्साउन नाम जोडिएको हो ? वा मलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाले आफुलाई तर्साउन खोजिएको भएपनि आफु असत्यको सामु नझुक्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, यदि त्यसरी यहा मलाई तर्साउन खोजिएको हो भने म असत्यको अगाडी कहिले पनि तर्सिन्न । सरकारले मलाई ढाट्न सक्ला तर जनता र मतदातालाई ढाट्न सक्छ ? जनता र मतदातालाई ढाट्ने सरकारले कहिले पनि काम गर्न सक्दैन् । कसरी विश्वास गर्ने यहाँ विश्वासको संकट प¥यो । विश्वासको संकट प¥यो यहाँ । नभएको मान्छेको नाम लेखेर मिडियाबाजी गराउने काम किन गरियो । मर्लाइ शंका उत्पन्न भयो । मलाई जवाफ चाहिन्छ विश्वासको संकट प¥यो ।’
आफुले सरकारका विरुद्धमा कुनै लगत कुरा नबोलेको भएपनि आफुलाई किन तर्साउन खोजियो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘म अचम्ममा परे यो स्वेतपत्र हो की अस्वेत पत्र हो । मैले कुनै गलत कुरा त बोलेको छैन् तर राज्यव्यवस्था समिति हुँदा कुनै ऐनहरु आउँछन् जो ऐन संविधान भन्दा बाहिर आएर ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने कुरामा बोल्छु । परिमार्जन गर्न म पनि लाग्ने गरेको छु । अर्को कुरा विकाश समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ । सरकार दलालको घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । जनताको विकास निर्माणको तिव्र चाहाना छ । सरकारले यसतर्फ जानुपर्छ भनेको छु । अरु केही गरेको छैन् ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुमा नाम उल्लेख नहुनु र त्यो भन्दा अगाडीको सरकारले गरेका निर्णयमा नाम लेखिनुले पनि आशंका उब्जाएको बताउनुभयो । उहाँँले भन्नुभयो, ‘म कात्र्तिक १३ गते होइन असोज ३० गतेबाट गृहमन्त्रीकेो जिम्मेवारीबाट म हटेको छु पत्रकार सम्मेलन गरेर । त्यसपछि विना विभागिय जिम्मा थियो । मन्त्री नै नभएको नाम लेखिनुको कारण के ? लेख्नुपर्ने नाम किन लेखिएन् ?’
स्वेतपत्रमा देखिएका कुराहरुको विषयमा बुझ्नका लागि ट्रष्टको कार्यालयमा गएर निवेदन दिएपनि त्यहाँका कर्मचारीले कुनै कागजपत्र नै नदिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँका कर्मचारीलाई आफु गृहमन्त्री हुँदा ट्रष्टको कार्यालयमा नै नआएको भएपनि आफ्नो नाम कसरी जोडियो भनेर सोध्दा कर्मचारीहरुले पनि ‘तपाईको पालामा कुनै निर्णय नै भएको थिएन’ भनेर भनेको शर्माले बताउनुभयो ।